तत्काल कल! मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 मार्च 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
यो एक रोमाञ्चक समय हो, किनभने मेरो स्वतन्त्र लेखन कार्यको प्रतिरोधले ठूलो अनुपातमा लिन्छ। यो फेसबुक सेंसरशिप यति ठूलो छ कि फेसबुक बाट मेरो वेबसाइटमा आएका आगन्तुकहरूको संख्या काफी छ। यो आँकडाबाट स्पष्ट छ। यद्यपि यदि सन्देशहरू सैकड़ों पटक साझा गरिएको छ भने, पाठकहरूको संख्या जो फेसबुक मार्फत मेरो साइटमा पुग्छ, बढ्छ। स्पष्ट रूपमा फेसबुकमा एक कठिन सेन्सेन्ट लक छ र यसको मतलब पेपरमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अझै पनि अवस्थित छ, तर व्यवहारमा कसैले पनि यो देख्न सक्दैन। मुख्यधारा वा नियन्त्रित विपक्षी विचारधाराबाट विचलित सबै केहि मात्र देखाइएको छैन। फेसबुकमा लगभग 18 हजार अनुयायीहरूसँग राम्रोसँग राम्रो छ, तर उनीहरूले मात्र मेरो सन्देशहरू देख्न पाउँदैनन् वा चाँडै उनीहरूलाई हेर्छन्।
तपाई किन चिन्ता गर्नुपर्दछ? किनकी धेरै मानिसहरू मुख्यधारा मिडिया र नियन्त्रण विकल्प मिडियाको प्रिन्ट बक्स को धारणा व्यवस्थापन संग मात्र सामना गरिरहेका छन्। "ठीक छ र, मानिसहरू आफैलाई स्मार्ट हो", तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ। म पनि सोच्दैन कि मान्छे मूर्ख छन्; म मात्र मात्र भन्न चाहन्छु कि खेल खेल्न यति परिष्कृत भएको छ कि कहिलेकाहीँ साँच्चै स्वतन्त्र स्वतन्त्र सुन्न राम्रो हुन्छ। मैले सोधेँ कि मैले देखेको छु कि म चीजहरू बढाउन हिम्मत गर्छु कि नियन्त्रणकारी चेतनाले सजिलै तल हटाउँछ, कमजोर वा विकृत गर्छ।
यदि तपाइँ यो स्वतन्त्र ध्वनि चाहनुहुन्छ अवस्थित गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने तपाईको समर्थन बिल्कुल आवश्यक छ। मलाई यो वेबसाइटको लागि सबै खर्चहरू भाँच्नु पर्छ र किनकि मैले धरतीको स्तर भन्दा माथि मेरो टाउको राखेको छु, मेरो नाउँ धेरै हदसम्म अनलाइन छ, यो आय उत्पन्न गर्न गाह्रो बनाउन। हालको घटनाहरू पछ्याउँदै र लेखनको लागि प्रेरणा खोज्दै के सबै वेबसाइटहरूले एक साना सम्पादकीय टोलीको साथ काम गर्छन्। सम्भवतः उनीसँग पनि एक (AIVD) सब्सिडी जार छ। म सबैले सबैलाई A देखि Z बाट सबै केहि गर्छु र आय बिना बाँच्न चाहन्छु। यसको अर्थ छ कि म केवल सर्भर व्यवस्थापन, वेब डिजाईन र प्राविधिक रखरखाव गर्छु, तर म आफैले सबै लेख लेख्दछु र तपाईंको सहयोगमा बाँच्न चाहन्छु। त्यो केक को एक टुकडा जस्तो लग सक्छ, तर ध्यान दिनुहोस कि धेरै वेबसाइटहरु को धेरै सम्पादकों संग काम गर्दछ र शायद उनको निपटान मा एक ठूलो बजेट छ।
मैले हालैमा 500 यूरो राख्दा पुरानो PHP कोड पुन: लेख्नको लागि वेबसाइट चलाउछ, किनभने यो कोड अब समर्थित छैन। यो एक लेखक को लागि एक महान् उपक्रम हो जसले आफ्नो टाउको पानी माथि राख्ने प्रयास गर्दछ। वेबसाइट अब सजिलै संग चलिरहेको छ। अर्को बाधा सेंसरशिप बाईपास गर्ने तरिकाहरूको खोजी हो।
कुनै विलाप छैन, तर अत्यावश्यक कल एक सदस्य बन्नु र समर्थन गर्न को लागी, किनकि यो अस्तित्वमा रहन निकै गाह्रो हुन्छ। निजी सन्देशहरू मार्फत लेख साझेदारी गर्नुहोस्, मेरो वेबसाइटमा ई-मेल गर्नुहोस् वा इङ्कित गर्नुहोस्, तर पहिले नै: सदस्य बन्नुहोस्। तपाईंको समर्थन तुरुन्त आवश्यक छ! अग्रिम धन्यवाद!
छोटो अवधिमा पहिले नै ब्रेन-कम्प्यूटर इन्टरफेसहरू: फेसबुक चाँडै हाम्रो विचारहरू पढ्न सक्नुहुन्छ? उत्तर: हाँ
ट्याग: दान, विशेष, सदस्यता, मार्टिन भिजल्याण्ड, समर्थन
12 मार्च 2019 मा 22: 10
त्यहाँ धेरै संचार प्लेटफार्महरू छन्, यो फेसबुक डम्प गर्नको लागि समय छ, उनीसँग उनीहरूको संवेदनाको साथ केहि छ।
म तपाईंलाई मार्टिनलाई नि: शुल्क इन्टरनेटको रूपमा रूपमा देख्छु, अब यो लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तपाईसँग मेरो सहयोग छ!
13 मार्च 2019 मा 10: 53
त्यहाँ त्यहाँ धेरै छनौट छ, मेरो विचारमा, ठीक छ समस्या। मानिसहरूले धेरै जानकारी स्रोत र प्लेटफार्मबाट छनौट गर्न सक्छन् कि समाजको स्तम्भिकरणको समय फिर्ता छ, तर फरक तरिकामा ... धेरै परिष्कृत।
यो बाह्य संसारलाई स्पष्ट छ जुन तपाइँसँग सम्बन्धित छ जुन एक धर्मसँग सम्बन्धित छैन वा होइन। यदि तपाईं कुनै समूह वा स्तम्भसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न भने, तपाईंले केहि पनि भाग लिन सक्नुभएन र त्यसैले तपाईं केहि पनि हुनुहुन्न। यी दिन सबै स्तम्भहरू बाहिर गएका छन् र तपाईं कम्प्युटर वा स्मार्टफोनको पछिल्ला छनौट गर्नुहुने कुन समूहहरू ... तपाई रङ जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो जानकारी र जीवनको मार्ग रङ्ग र भ्रामक हो, जस्तै कि स्तम्भको समयमा पुरानो दिनमा सच्चाईमा आधारित उपयोगी जानकारीको सट्टा। कुन व्यक्तिहरू तिनीहरूको कामको अतिरिक्तसँग सम्बन्धित छन् (वा होइन) हो आजकल प्राय: अज्ञात हुन्छ। यद्यपि मानिसहरू वास्तवमा उनीहरूको कामको लागि गर्दछन् गोपनीय छ, जस्तै कि पेन्डिङ खण्डको साथ रोजगार अनुबंधमा राखिएको छ। एक वकीलले यसो भन्न सक्दैन कि उसले निर्दोष नागरिकहरूलाई खतरनाक पत्रहरू पठाउँदै छ, किनभने उसको ग्राहकले धेरैको लागि भुक्तान गर्दछ ... बस एक उदाहरण दिन। मानिसहरू उपस्थित रहन मनपर्छ र बाह्य संसारमा सुपरफर्मिक चीजहरूसँग व्यवहार गर्दछन्, ताकि तिनीहरू अजीब भेट्न नसक्नु, तिनीहरूको गर्दनको साथ हेर्दै र उनीहरूको प्राप्त स्थितिलाई गुमाउनु पर्दछ।
मान्छे मार्टिन व्रिजल्याण्ड को लागी एक रास्ते मा या अन्य को लागी मनाई रहनु पर्छ। त्यो धेरै गाह्रो छ किनकि त्यहाँ धेरै नियन्त्रण गरिएका विरोधीहरू छन्। कतिपय नियन्त्रित विरोध त्यहाँ कसरी सम्भव छ? जाहिराखेल यति धेरै व्यापक छन् कि हाम्रो सत्य चेतना संग पूर्ण सत्य गाह्रो छ। अधिकांश मानिसहरूले अस्वीकार गर्छन् जब तिनीहरूले अनन्त वातावरणमा अन्याय देख्छन् वा प्रणालीमा केही झूटा देख्छन्। मानिसहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मात्र योद्धाहरू होइनन् तर असल भेडाहरू होइनन्। केवल यी भेडाहरू हेर्न थालेपछि मात्र तिनीहरू कसाई चक्कु तिर जान रहेछन्, तिनीहरू केवल केहि गर्न तयार छन्। तर दुर्भाग्यवश, फेरि पनि, भेडाहरूले चिल्लाउने वा मानसिक रूपमा बिस्तारै सुरु गर्छन्, त्यसैले तिनीहरू प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्। त्यसोभए हामीले युद्ध भेडाहरू खोज्नु पर्छ!
योद्धाहरू र मर्ने-सच्चा सत्य खोज्नेहरू मार्टिन व्रिजल्याण्ड वेबसाइटमा चाँडै वा पछि आउनेछन्, तर हामी कसरी यी युद्ध भेडा पुग्न सक्छौं?
13 मार्च 2019 मा 03: 31
13 मार्च 2019 मा 11: 28
म तिमीलाई राम्रो अर्थ बुझ्छु।
तर मलाई लाग्छ कि यो लेखकले फेसबुकको ठीकसँग प्रयोग गर्दछ किनकि सामान्य जनता त्यहाँ उपस्थित छ (जनावरहरूको हड्डीबारे कुरा गर्दै)
तर तपाईं कुन प्लेटफर्मको लागि लक्ष्य गर्नुहुन्छ?
17 मार्च 2019 मा 12: 27
अलि कुजुर, हाँ के हो भनेर एफबी को सामान्य जनता सम्म पहुँचने को लागि उपयुक्त प्लेटफार्म हो, मैले केहि वर्ष को लागि एफबी को उपयोग गरेको छ, एफबी को सेंसरशिप पनि देखेको छ, धेरै खाताहरु जो 30 दिन ब्लक या पूरी तरह देखि हटाए पछि, WhatsApp को अधिग्रहण, एफबी अब डाटा आउँछ जब कुनै अन्य प्लेटफर्मको तुलनामा ठूलो छ। मेरो अन्य प्लेटफार्महरूसँग धेरै अनुभव छैन, तर निश्चित रूपमा एक दर्जन 80 सँग 300 लाख खाताहरूमा छन् जुन वैकल्पिक प्रस्ताव गर्न सक्दछ। यदि एकदम ठूलो र शक्तिशाली हुन्छ भने व्यक्तिले यो शक्ति बाँड्न स्विच गर्न सक्छ। यस हप्ताको सुरुमा एफबीले शून्य हेजलाई अवरुद्ध गर्यो, ठूलो प्रहार अनलाइन पछि तर राजनीतिमा पनि, सबै कुरा 24 घण्टा भित्र उल्टाइएको थियो र एफबीले बताए कि यसले एक आन्तरिक गल्ती गर्यो, यो वास्तवमा एक गल्ती थियो वा अधिक कार्य प्रतिक्रिया परीक्षण, जसले जान्दछ। मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा म अलवि अय्य एफबी भन्न चाहन्छु
13 मार्च 2019 मा 16: 51
मार्टिनलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ। सबै क्षमताको अनुसार मेरो क्षमता वा सदस्य हुन को लागी। यो सम्भव छ। मार्टिन एक मात्र एक हो जसले राज्य नियन्त्रणको अधीनमा छैन !!!!
« BREAKING: नजिकको विश्व-स्तरीय परमाणु आपदाको ठूलो अलार्म!
क्रिस्टचर्च न्यूजील्याण्डमा दुई मस्जिदहरूमा आक्रमणमा 49 को मृत्यु »
कुल भ्रमण: 11.614.169
1.614 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्